ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္ေမာင္း ကုမၸဏီ Autra Tech က Pre-A ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နီးပါး ရရွိ - Pandaily
ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္ေမာင္း ကုမၸဏီ Autra Tech က Pre-A ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နီးပါး ရရွိ
Jun 08, 2022, 18:59ညနေ 2022/06/08 23:18:53 Pandaily
Autopilot trunk ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ Autra Tech က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်းသည် pre-A ရန်ပုံ ငွေကို April ပြီ လတွင် ပြီးစီး ခဲ့သည်စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၂၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉. ၉ သန်း) ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Cathay Pacific Capital, Xianghe Capital နှင့် Bai Capital တို့ပါဝင်သည်။
ယခင်က ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ လနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် IDG နှင့် SF Holdings တို့ ပူးတွဲ ဦး ဆောင်သော ကောင်းကင်တမန် နှစ်ကြိမ် ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ Rocket Capital နှင့် Baidu Venture Capital တို့ သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၁ ၉၁. ၅ သန်း ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
Altra Technologies သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထရပ်ကား များအတွက် L4 Class autopilot နည်းပညာ ကိုအာရုံစိုက် ရန် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ သည့် ပင်စည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေးရန် မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ ကိုအသုံးပြုရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။
“Autra Tech တရုတ် အခြေစိုက်, ထိပ်တန်း Self-မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ နှင့်အတူ အဓိက လိုင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အပေါ် အာရုံစူးစိုက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု နှင့် အကြီးစား စစ်ဆင်ရေး ၏ ရည်မှန်းချက် နှင့်အတူ ။ ကျနော်တို့ အလုပ်သမား ရှားပါး မှု လျှော့ချ နေစဉ် နည်းပညာ တိုးတက်မှု မှတဆင့် အဓိက လိုင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက် ကုန်ထုတ် စွမ်းအား မြှင့်တင် ရန် အားထုတ် မှု” ဟု ကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူ Taoji ကဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီက April ပြီ လတွင် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ နောက် အဆင့်တွင် မူလက ယာဉ်မောင်း နှစ် ဦး လိုအပ်သော (ဥပမာ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ အကြား) အလယ်အလတ် ခရီး ဝေး လမ်းကြောင်း များကို autopilot နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် ယာဉ်မောင်း တစ် ဦး တည်း ဖြင့် ပြီးစီး နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုန်တင် ကုန်တင်ကား ၁၄ သန်း ရှိပြီး အနာဂတ်တွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သမား ပြတ်လပ် မှု အကြီးအကျယ် ကြုံတွေ့ ရနိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်နေရာ များစွာရှိသည်။ CICC မှ ယုံကြည် သည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ထရပ်ကား များ၏ အားသာချက် များမှာ အဓိကအားဖြင့် အချက် သုံး ချက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထရပ်ကား လည်ပတ် ချိန် ကိုတိုးမြှင့် ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ခြင်း၊ CICC မှလည်း အလိုအလျောက် မောင်း နှ င်သော ထရပ်ကား များသည် နောက်ဆုံးတွင် ကုန်ကျစရိတ် ကို ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချ နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။